Can alefa mivantana amin’ny TVM: mitady hevitra saingy… tsy mampanantena ny fanjakana | NewsMada
Ao anatin’ny fitadiavam-bahaolana amin’ny fampitana mivantana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (Can 2022), amin’ny fahitalavi-pirenena ny fanjakana, ankehitriny. Na izany aza, tsy mampanantena ny fanjakana satria hoe lafo be ny sarany.
Namaly ny fimenomenonan’ny olona, ny amin’ny tsy fandefasana ny lalao amin’ny fahitalavi-pirenena (TVM), ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriantongarivo Lalatiana, omaly ka nilazany fa lafo be ny saran’ny fampitana izany mivantana, izay mitentina 500 000 Euros na 2 lavitrisa Ar mahery.
“Mavesatra be izany kanefa niezaka niady varotra tamin’ny Union Africaine des Radios (UAR), hany afaka mampita ny sary ny minisitera ka 350 000 Euros na 1 miliara Ar mahery ihany koa ny farany. Lafo loatra ka sao mety hisy hanome tsiny indray fa tsy laharam-pahamehana izany. Tsy afaka ny handoa izany ny fanjakana ao anatin’izao fahasahiranana izao, noho izany tsy afaka ny hampanantena”, hoy izy.
Nohamafisiny kosa fa manao ny ezaka rehetra ny fitondrana mitady hevitra handefasana farafaharatsiny ny lalao ampahavalon-dalana na ampahefa-dalana, amin’ny alalan’ny fifanarahana amin’ireo fahitalavitra hafa any ivelany nahazo ny fahafahana mandefa izany. Nambarany fa teo aloha afaka nandefa ireo lalaon’ny Can sy ny Mondial ny fitondrana satria nandray anjara ny Barea ary tao anatin’ny fotoana tsy nisy olana, toa izao iainan’i Madagasikara izao, izany.
Amin’izao fotoana izao, ankoatra ny fisian’ny valanaretina Covid-19 mbola atrehina ihany koa ny fahatapahan-jiro, araka ny fanambarany hatrany ka sarotra ny handoavana io vola be io. Miandry am-pahatoniana izany ny mpankafy baolina kitra.